Yinde kangakanani i-MS 150? - Ukuzivocavoca Umzimba
Main > Ukuzivocavoca Umzimba > Ukuqeqeshwa kukaNks 150 - ungakufinyelela kanjani
Ukuqeqeshwa kukaNks 150 - ungakufinyelela kanjani
Yinde kangakanani i-MS 150?
Lokhu ikakhulukaziI-MS 150ungomunye wabagibeli abakhulu abahlelekile ezweni elinabagibeli abalinganiselwa ku-13,000 unyaka ngamunye. Ukuhamba ngezinsuku ezimbili ngezinketho kusuka kumamayela angama-75 kuya kwayi-100 ngosuku lokuqala, futhi kube ngamamayela angama-65 kuye kwangama-80 ngosuku lwesibili.2 uNovemba. 2010 r.
Ingabe lokho kuzwakala kujwayelekile kuwe? Ubhalisele ukushayela amakhilomitha ayikhulu. Futhi mhlawumbe kungenxa yesizathu esihle, kepha awukwazanga ukujima futhi unovalo. Ngisho, unovalo ngempela. - Yebo.
Akumangazi Ngempela ngoba ukushayela kwekhulu leminyaka kuyinto enhle impela, kepha sicabanga ukuthi singakufinyelela ku-24/7 uma ulandela lesi seluleko. (umculo oqabulayo) - Ngakolunye uhlangothi, sifuna ukwenza lokhu kugibela kube lula ngangokunokwenzeka futhi singakwenza lokhu ngokuqinisekisa ukuthi ibhayisikili lethu lisesimweni esincomekayo ngakho-ke qala uqiniseke ukuthi amaketanga ethu namagiya ahlanzekile futhi aqiniseke ukuthi iketanga lethu liya phezulu. Uma iketanga ligqwalile futhi lomile lizokweba amandla akho abalulekile.
ukukhwela ifoni ngebhayisikili
Bese sibheka izingcindezi zethu zamathayi. Ngingaya ku-80, 90 PSI futhi lokhu kuyisiqalo esihle sebhayisikili elilodwa loMjaho, kepha kuncike ngokuphelele esisindweni sakho, akufanele ube uthambe kakhulu ngoba lokho kuzokuphuca namandla amahle noma awufuni ukuba lukhuni kakhulu ngoba lokho kuzoba iqiniso, ukungakhululeki kakhulu Ibhayisikili ibhayisikili elisheshayo. (Umculo ojabulisayo) Kulungile lokhu kubaluleke kakhulu ngoba ekugcineni ukudla kuwuphethiloli futhi udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi uyaqhubeka nokudla nokuphuza phakathi nokuhamba kwakho ngebhayisikili.
Kodwa ngaphambi kokuba uhambe, cabanga ngokucophelela ngalokho okufaka ebhayisikili lakho.Yebo, imikhiqizo yokudla okunempilo inkulu futhi iqukethe amakhalori owadingayo futhi kulula ukuwetyisa, kepha sincoma ukuthi udle ukudla okuqinile okujwayelekile njengama-sandwich amajamu, noma i-flapjacks Ukukhetha imigoqo ye-oat ebonakala isebenza kahle impela, ikakhulukazi uma ungajwayele leyo mikhiqizo yokudla kwezemidlalo esiswini sakho. Futhi uma udinga ikhithi yezimo eziphuthumayo ehoreni lokugcina, kungani ungathathi ijeli.
Into yokugcina ofuna ukuyenza ukugqoka izakhi zezulu ezinemvula lapho lingekho ithuba lemvula. 13 degrees nelanga. Iphelele.
Qiniseka ukuthi unemishini enhle engahlelekile futhi ekhululekile ngoba into yokugcina ofuna ukuyenza ukugibela ikiti yangokwezifiso yokugula ngoba izokubambezela. Ungazizwa uthanda ukugqoka i-lycra, kepha uma umomotheka futhi ungayithatha, i-lycra eminyene iyasebenza impela futhi izokwenza ukugibela kwakho kube ngcono kakhulu. (umculo ojabulisayo) Ukugcina i-chassis yakho ikhululekile ngangokunokwenzeka nakho kubaluleke kakhulu.
Kepha uma ungakagibeli ubude obude ngaphambili, ungahle uzizwe ulimala kancane ekugcineni kosuku. Kepha ungakhathazeki, uzodlula kukho. Into eyodwa ongayenza ukuvimbela ukugadla noma ukucasuka okungafuneki ukusebenzisa into elula njengokhilimu we-chamois.
Cabanga ngakho njengamafutha okugcoba isitho sakho. Mina ngokwami ​​angiyisebenzisi, kepha abanye abantu bakuthola kuyasiza ngempela. Lokhu kuzoba nomthelela.
Noma ngabe kukhona umshayeli oyedwa vo, kulingana ukuthi t Sheshisa uhambo lwakho lwamamayela ayi-100 futhi ulinciphise lifike kuma-70. Inqobo nje uma uhlala emuva ngemuva komshayeli ngaphambili, uzokonga amandla amaningi ngangokunokwenzeka futhi akunikeze ithuba elihle kakhulu lokwenza idrayivu yakho eyi-100 mile uthe kufanele ube ngolondolozayo ngempela ngejubane lakho. Ngakho-ke uma umuntu isondo lakho olilandelayo lihamba kancane kakhulu ekukhuphukeni kwakho okuphezulu, udinga ukuthi uzimisele ukuhlehla futhi ubayeke bahambe - ngakho zama ukukhuphuka ngejubane elikulungele.
Ngale ndlela awushisi amandla abalulekile ngokushesha kunesidingo. - Ungacabanga ngayo njengemoto. Wenza uhambo olude futhi unenani elilinganiselwe likaphethiloli.
Lapho uqala ukusheshisa kanzima impela, lapho uphuma ezimpambanweni zemigwaqo usheshe ushayele umqansi onguthelawayeka, uzoshaya leli patrol ngokushesha okukhulu ngakho-ke kufanele ushayele kahle futhi kuyafana ncamashi uma ubunakekela umzimba wakho cishe ikhulu leminyaka - ngakho-ke yiba olondolozayo futhi ungaguli unethezeke ngayo yonke indlela ezungeze iHigundred Mile Drive yakho. (IJoy Music) - Ngaphandle kwalezi zeluleko, amamayela ayi-100 asazwakala ethusa kancane. Ngakho-ke kungani ungenzi idrayivu engamamayela angama-40 esikhundleni salokho bese uyenza izikhathi ezine. - Yebo, kuzwakala kuyisiphukuphuku, kepha kuyasebenza, hhayi emzimbeni kuphela, ngakho-ke ungabamba ukudla bese uthola ikhefu elihle, kepha futhi nengqondo.
Singakwazi ukumboza wonke amamayela angama-25 ngakho-ke ungakhathazeki. Futhi kungekudala inhloso enkulu izofinyelelwa - lokho kulungile. Sebenzisa ngokunenzuzo ikhefu elincane olithatha phakathi kokushayela kwakho kwamamayela angama-40.
Thatha ukudla uhambe nakho. Mhlawumbe gcwalisa amabhodlela akho amanzi bese uhlala emuva engqondweni ngaphambi kokuqala isigaba esilandelayo. Ukuphela kwento engingayisho ukuthi mhlawumbe awufuni ukuphumula isikhathi eside phakathi kwamamayela angama-25 wamamayela ngoba kuzoba usuku olukhulu noma kunjalo futhi uma uqala ukwakha ekuphumuleni okuningi ungathola ukuthi uyaphela isikhathi .- Uma wazi ukuthi usuku luhamba kanjani, ungazithola uqina.
Imizuzu engu-15 yokuzivocavoca umzimba
Ngakho-ke zama ukuqondiswa futhi mhlawumbe uthathe lawo makhefu phakathi kwemizuzu emihlanu kuya kweyishumi ngaphambi kokuba uqale futhi, kwesokudla, ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuqala - Kakade? - Sekuphele imizuzu eyi-10 - Isikhathi sendoda siyahamba. Ngakho-ke uyaqiniseka ukuthi ibhayisikili lakho lisendaweni ephezulu yefindo. Uqinisekisa ukuthi izingubo zakho azikubambeli emuva futhi uyazivikela emoyeni ngangokunokwenzeka ngokulandela umgibeli oyedwa noma abaningi phambi kwakho ucabanga ngamakhono akho.
Ngakho-ke faka uphethiloli ngangokunokwenzeka futhi ulondoloze ijubane lakho. Futhi ungakhohlwa ukushefa imilenze yakho. - Ima kancane, buddy.
Bengicabanga ukuthi sibonile ukuthi asizukuncoma ukushefa umlenze, ngabe kuyawenza umehluko omkhulu? - Ngempela. Kubukeka kukuhle. Zizwe kahle.
Hamba ngokushesha. Kunengqondo. Sizoyithatha le mpikiswano kamuva.
Okwamanje, ngicela unikeze le ndatshana isithupha esikhulu. Sikufisela inhlanhla lapho usesha ikhulu leminyaka. Nginesiqiniseko sokuthi ungakwenza.
Vele ulandele iseluleko esikunikeze sona. Futhi uma ufuna imininingwane ethe xaxa ngasohlangothini lwezondlamzimba lwezinto ezibaluleke kakhulu, khona-ke sinendatshana ekhuluma ngale ndaba ezansi lapho.
Ngiziqeqeshela kanjani ukugibela ibhayisikili elingamamayela ayi-150?
Faka u-10% esikhathini sakho sevikiukugibelasekukonke ngaphandle kweviki elilodwa noma elingu-4 lapho uphumula ukuvumela ukuzivumelanisa nezimo kwenzeke. Sebenza okungenaniAmamayela ayi-150ngeviki ngaphezulu kwezwe elifana nelakhogibela. Lokho kungaba ngama-20Izinkulungwanenjalo phakathi nesonto kanye nama-40 ngeMigqibelo noma ngeSonto.
esinye sezinqumo zethu ze-GCM New Year 2017 ngethemba lokubhala ikhulu eliphindwe kabili ngamamayela ayi-200 ngakho-ke ukungeza amakhulukhulu eminyaka yinto yakho, engahle isondele kakhulu kuwe, ingahle icace, kepha ngasikhathi sinye bekufanele sikuvume lokho akekho noyedwa wethu lapha e-GC futhi sesigibele amakhulu amabili eminyaka sizama ukuthola ukuthi singathengisa kanjani eyodwa, sathintana nochwepheshe abambalwa be-ultra-tolerance njengabangani bethu uBruce Park. Siphinde sabuyela olwazini lwethu lokuziqeqesha ukuze senze ikhophi, uTom Jordi ucele ama-expressionos ku-nervösyoume uma unentshisekelo ngempela kumcimbi wokukhuthazela kakhulu, asikho isinqamuleli sangempela sokuthola amamayela emotweni anamathele ukuphatha bhala amamayela angama-50 lapho inhloso yethu ikhulu eliphindwe kabili lokuthi kufanele sihambe ibanga elingakanani uMatt cishe ibanga elingamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisishiyagalolunye ebanga imayela ngo-yebo uxolo, ukuzilungiselela kwakho kubalulekile ngamazwi alula kaBruce Uma Uma ungazilungiselelanga hhayi ukwenza ukugibela okude ngoba lokho ngeke kulungise umzimba wakho kuphela ekubukeni komzimba, kepha kuzokwenza nomzimba wakho ujwayele ukuhamba ngamabhayisikili ngaleyo nkathi yokuhlala uhlale umzimba wakho ngasikhathi sinye. Awudingi ukumboza ibanga lomcimbi wakho lapho uziqeqesha, kepha bekufanele ngabe umboze okungenani uhhafu webanga ngezikhathi ezithile Izinsuku ezimbalwa ezilandelanayo zizofundisa umzimba nengqondo yakho ukuqhubeka lapho sezikhathele, kufana nokuhlose kepha ukwakhiwa kancane kancane kukhulisa ubude bohambo lwakho olude kakhulu isonto ngalinye, futhi ukwenze kancane kancane, ngoba ukufika isikhathi eside kakhulu kungalimaza kakhulu kunokulunga uma wazi ukuthi iyini injongo yakho yokugcina, ukuthi ungafika kanjani phakathi , bese ugxila kulokho Kuphumula ukusebenza ndawonye kubaluleke kakhulu njengoba uphinda amahora amakhulu ukuya kulokhu okweqile, futhi isikhathi sokuzivocavoca sizosebenzisa umzimba wakho wokugcina, ngakho-ke kubalulekile ukuthi uthole okwanele ukuphumula ukuze ululame uma kungenjalo uzibeka engcupheni umgodi owodwa omkhulu wokumba umsoco uzophinda kabili nangaphandle kwesondo Uma ibhayisikili lizokusiza ukuthi ushintshe konke okusebenzisile lapho uhamba ngebhayisikili kunalokho esikudingayo ekugibeni kwakho, bese kuba ngumgibeli ongumakadebona uzo p ngokufanele ube sekuphele ikhulu leminyaka manje, noma ngabe ukushintsha kokudla kwakho kungahambelani nobude obuphindwe kabili futhi uzophatha izigaba ezithile ezimnyama ngaphandle kokuthi ukudla kwakho kuhlelwe kahle futhi kwenziwa Thola ukuthi yini okukusebenzelayo Kungenzeka amandla aphansi uthola lawa mabanga amade Ukuhamba ngezinhlobo ezahlukahlukene zokudla noma iziphuzo, kungcono kuwe Ukuzivocavoca kwakho ngaphambi kosuku lomcimbi ukuqinisekisa ukuthi umzimba wakho usesimweni esifanele isinyathelo sokuqala, kodwa okufanayo kufanele kusebenze ebhayisikili lakho ukudinga amahora ayi-10 esihlalweni kunzima ngokwanele into yokugcina oyifunayo umuzwa othile wokuzizwa noma ongakhululekile ngakho-ke qiniseka ukuthi 'usesimweni esihle futhi uhambisana kahle kakhulu.
Naka ngokukhethekile izindawo zokuxhumana nomzimba wakho. Ama-insoles wezicathulo abambe isikhundla, noma yini engathuthukisa ukunethezeka kwakho. Ngakho-ke cabanga ukuthi izinto ezinjengamathayi amakhulu noma izingubo ezingcono zizokwenza umehluko omkhulu, ungaqali kanzima, asikho isikhathi esiningi sokululama ngesikhathi somcimbi wokukhuthazela, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi isu lakho lokushayela ijubane, kodwa empeleni, ukusebenzisa okuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo kanye / noma imitha yamandla ukwenza isiqiniseko sokuthi uhlala ezindaweni ezifanele kungumbono omuhle, amabanga okukhuthazela, kuba ngumdlalo wengqondo oba ngumdlalo obucayi.
Abantu abaningi bayakwazi ukushayela amahora ayishumi, kepha izingqondo zabo ziphendula ukuthi ukuqeqesha ingqondo yakho kubaluleke kangangoba awukwazi ukuvumela ukuphazamiseka okuncane njengomoya ovunguzayo ukuthinte ukugqugquzela kwakho nokuzimisela ukukulethela Usebenzisa Ingqondo Yakho Ukukusebenzisa Ukwehluka kokuhlala unethemba Noma nini lapho uchwepheshe wokugibela ukugijima uBruce Barkley ethi ingqondo yakho iyimpahla yakho enkulu, uzobhekana nezikhathi ezinzima nezimbi, kepha gxila enhlosweni onayo, uthole izindlela zokuyiphula, wonke umuntu uzothola indlela yakhe yokwenza lokhu UBruce uphakamisa ukuthi angacabangi ngesibalo esikhulu sebanga ngoba lokhu kungacishe kube kukhulu kakhulu futhi kube yindlela ende ngezinye izikhathi. Ngakho-ke cabanga ngesikhathi oya phambili kunamamayela noma amakhilomitha, okuyinombolo encane kakhulu futhi okulula kakhulu engqondweni yakho. Imicimbi yebanga le-Ultra cishe ingama-75% okugxilwe kuyo nokuzimisela kanye nama-25% ngokomzimba.
Ekuphetheni, umzimba wakho ungenza noma yini oyifunayo, yingqondo yakho okudingeka uyiqinisekise, ngakho-ke ungalokothi uyinikeze izinto ezikhuthazayo uMat futhi sazi iningi lenu Niyayithanda ngokuphelele i-adventure yakho yokukhuthazela, ilungiselele emazwaneni angezansi, uma awukenzi lokho, okudingeka ukwenze ukubhalisela i-GCN, chofoza ilogo yethu okufanele ivele esikrinini o futhi ebaluleke ngokwedlulele Lapho uzogibela uhambo lokukhuthazela, inkinga iyinduduzo. Ukwenza likhululeke kakhulu ngebhayisikili lakho, chofoza lapha, yebo nokuthi ungakulungiselela kanjani ukuqala kwakho ukuhamba ibanga elingamamayela ayi-100, kuthiwani ngokuchofoza uJeff ezansi nalolu oluthi oh no no, do I?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukugibela ibhayisikili amamayela ayi-150?
Angikwazanga ukugcina lelojubane le-Amamayela ayi-150. Kepha ngisho ne-12 mph yeAmamayela ayi-150amahora angu-12.5, isikhathi sokugibela, ngaphandle kokufaka izitobhi. Imizila eminingi kumasayithi afana ne-broadwithgps.com noma i-dava.com, noma i-GPS eqoshiweugibele, ubale lonke ushintsho oluncane ekuphakameni.
Ngidinga uhlobo olunjani lwebhayisikili le-MS 150?
Kubabambiqhaza abangama-97%, i-I-MS-150akuwona umjaho… kungukugibela komphakathi. Okusho leyo nduduzokufaneleibaluleke kakhulu kuwe kunejubane. Uma ugibela kaningi vele – futhi ugibela ibanga elingu-20 + mph –i-racieribhayisikili(njenge-S-Works Tarmac noma iMadone 6.9 SSL) ingahle ipheleleibhayisikiliOkweI-MS-150.Dis 19 2014
Kunzima kangakanani ukujikeleza amamayela angama-200?
Enye yezikhiye zefayela le-200-Ukugibela imayelaudla kakhulu kunendlela ocabanga ngayo (noma oyifunayo). Umzimba wakho udinga uphethiloli, futhi uma ukuibhayisikilingaphezulu kwamahora amathathu, amane, noma amahlanu ngesikhathi, udinga ukuyishaya kubhonk. Eyokuqala eyikhuluIzinkulungwanekwaba yingxenye elula.Dis 10 2018
Ngingakwazi yini ukujikeleza amakhilomitha angama-150 ngosuku?
150phakathi kuusukukulungile. Ukuzungeza umnikazi werekhodi lomhlaba wenza cishe ama-200Izinkulungwanengobausukuizinsuku ezingama-90. Uma usuqaleukugibelaibanga uzobona ukuthi yini okwazi.150phakathi kuusukukuyisiqalo nje.
izinkambo zokuhamba ngebhayisikili
Kunzima kangakanani ukujikeleza amamayela ayi-150?
Akukona lokhokanzima, kepha mhlawumbe kunzima ukwedlula indlela ocabanga ngayo. Ukukwenza ngezinsuku ezimbili empeleni kulula kakhulu, ngoba kumane nje kungama-75imayelaugibele. Uma ukwazi ukugibela ama-75Izinkulungwanengokudubula okukodwa, usendleleni yokwenza ifayili le-150-imayela.
Ushayela amamayela amangaki?
Lokhu kulinganiselwa kwakhoukushayelaisikhathi. Isibonelo uma uhlela ukuhambaAmamayela ayi-150, ngejubane elilinganisiwe lama-60Izinkulungwanengobaihoralolu hambo luzothatha cishe ezimbili nengxenyeamahora.
Isebenza kanjani i-MS 150?
I-BPI-MS 150umcimbi omangalisayo wokuqoqa imali. Futhi kumnandi, ungakushiyi lokho. Ezinsukwini ezingaphezu kwezimbili, abagibeli abangu-13,000, bonke ubujamo, ubukhulu nobudala - abavela kulo lonke elaseTexas - bazokwakha umugqa we-conga onamasondo amabili oya enhlokodolobha yezwe, beqongelelaI-Multiple SclerosisUmphakathi.2 jana. Okthoba 2018
Ukugibela ibhayisikili le-MS kungamamayela amangaki?
I-ugibeleimvamisa yenzeka phakathi kwezinsuku ezimbili futhi imvamisa izungezileAmamayela ayi-150 ubude, noma zingaba mfushane njengo-3Izinkulungwane(ukujabulisa umndenigibela) noma njengeyindenjengezinsuku ezingama-250 ngaphezulu kwezinsuku ezinhlanu.